Ilay Fiovan-tarehy | Fiainan’i Jesosy
Ilay Fiovan-tarehy Nahitana An’i Kristy Nomem-boninahitra
MATIO 16:28–17:13 MARKA 9:1-13 LIOKA 9:27-36
NANDRE NY FEON’ANDRIAMANITRA IREO APOSTOLY
Nisy zavatra nanaitra nolazain’i Jesosy tamin’ny apostoliny, tamin’izy nampianatra tany amin’ny faritr’i Kaisaria-Filipo, izay 25 kilaometatra teo ho eo niala ny Tendrombohitra Hermona. Hoy izy: “Lazaiko aminareo marina tokoa fa misy amin’izay mijoro eto tsy handia fahafatesana mihitsy, mandra-pahitany ny Zanak’olona ho tonga ao amin’ny fanjakany.”—Matio 16:28.
Azo antoka fa lasa saina ny mpianatra hoe inona no dikan’izany. Nentin’i Jesosy niakatra tany an-tendrombohitra avo i Petera sy Jakoba ary Jaona, herinandro teo ho eo taorian’izay. Alina angamba tamin’izay satria rendremana izy telo lahy. Nisy fiovana nitranga tamin’i Jesosy raha mbola nivavaka teo anatrehan’izy ireo izy. Hitan’ireo apostoly ireo fa lasa namirapiratra toy ny masoandro ny tarehiny ary lasa fotsy nanjelanjelatra ny akanjony.
Nipoitra avy eo i “Mosesy sy Elia.” Nanomboka niresaka tamin’i Jesosy momba ‘ny hahalasanany, izay hitranga any Jerosalema’ izy ireo. (Lioka 9:30, 31) Ny fahafatesan’i Jesosy sy ny fitsanganany amin’ny maty ilay hoe “hahalasanany.” Noresahiny vao haingana izany. (Matio 16:21) Hita àry fa tsy azo nialana ilay fahafatesana manala baraka niandry an’i Jesosy, ka diso ny tenin’i Petera.
Nisava tanteraka ny torimason’ireo apostoly. Nahagaga azy ireo izay hitany sy reny. Fahitana ilay izy nefa hoatran’ny tena izy ka lasa nandray anjara i Petera. Hoy izy: “Raby ô, tsara ho antsika eto, koa avelao izahay hanangana tranolay telo, ka ny iray ho anao, ny iray ho an’i Mosesy, ary ny iray ho an’i Elia.” (Marka 9:5) Te hanangana tranolay ve i Petera satria tiany hitohy ilay fahitana?
Nisy rahona namirapiratra nanaloka azy ireo raha mbola niteny i Petera. Nisy feo avy tao amin’ilay rahona nilaza hoe: “Io no Zanako malalako izay sitrako. Henoy izy.” Natahotra ireo apostoly rehefa nandre ny feon’Andriamanitra ka niankohoka tamin’ny tany. Hoy anefa i Jesosy: “Mitsangàna fa aza matahotra.” (Matio 17:5-7) Tsy nahita afa-tsy i Jesosy izy ireo rehefa niarina. Tapitra ilay fahitana. Nidina avy teny an-tendrombohitra izy ireo rehefa maraina ary hoy i Jesosy: “Aza lazaina na amin’iza na amin’iza iny fahitana iny, mandra-pitsangan’ny Zanak’olona amin’ny maty.”—Matio 17:9.
Niteraka fanontaniana ny nahitana an’i Elia tao amin’ilay fahitana. Hoy ny apostoly: ‘Nahoana no milaza ny mpanora-dalàna fa tsy maintsy ho avy aloha i Elia?’ Hoy i Jesosy: “Efa tonga i Elia, nefa tsy fantatry ny olona.” (Matio 17:10-12) I Jaona Mpanao Batisa no tian’i Jesosy horesahina. Nanao asa nitovy tamin’ny an’i Elia mantsy izy. Nanomana ny olona mba handray an’i Elisa i Elia ary nanomana ny olona mba handray an’i Kristy i Jaona.
Tena nampahery an’i Jesosy sy ny apostoly iny fahitana iny. Hita tamin’iny ny ho voninahitry ny Fanjakan’i Kristy. Nahita ‘ny Zanak’olona tonga tao amin’ny fanjakany’ ireo apostoly tamin’izay, araka ny nampanantenain’i Jesosy. (Matio 16:28) “Nahita maso ny fahamboniany” izy ireo tany an-tendrombohitra. Nitady famantarana ireo Fariseo mba hanamarinana fa i Jesosy tokoa no nofidin’Andriamanitra ho Mpanjaka. Tsy nomen’i Jesosy famantarana anefa izy ireo. Ny mpianany akaiky azy kosa no navela hahita an’ilay fiovan-tarehy, izay nanaporofo fa ho tanteraka ireo faminaniana momba an’ilay Fanjakana. Afaka nilaza àry i Petera tatỳ aoriana hoe: “Manana ny teny faminaniana isika, ary natao azo antoka kokoa izy io.”—2 Petera 1:16-19.
Inona no nitranga ka lasa nahita an’i Jesosy tonga tao amin’ny Fanjakany ny olona sasany mbola tsy nandia fahafatesana?
Inona no noresahin’i Mosesy sy Elia tamin’i Jesosy, tao amin’ilay fahitana?
Nahoana ilay fiovan-tarehy no nampahery ny mpanara-dia an’i Kristy?
Hizara Hizara Ilay Fiovan-tarehy Nahitana An’i Kristy Nomem-boninahitra